Shirka Jabuuti, Shirqoolka Jabuuti, Shuxshuxda Jabuuti, Maxaa ka shisheeya? | Nabadi caadalad ayaa kaa horresa
Shirka Jabuuti, Shirqoolka Jabuuti, Shuxshuxda Jabuuti, Maxaa ka shisheeya?	Seteembar 23, 2008
Alaa wayn ninkii aaminaa Awood leh
Ummad waliba aayaheeda in ay garato
Qolo walba sida ay doonto ayay u fasirtay hawlaha aan dhamaan ee mudada ka socda Magaalada Jabuuti, qolo shir ku sheegta, qolo shirqool tiraahda, qola waxyaabo ka sii liita ku sheegata. Waxaa ayaan daro ah in khatartu shirkani uu leeyhay ay aad uga sareeyo meelaha laga filayo ayaan Ummadda Soomaaliyeed ku baraarugsanayn. Waayo shirkan waxuu la mid yahaya shirkii Baarliin ee afrika 1884 dowladaha gumaystayaasha ahi ay Afrika ku qaybsadeen. Farqiga u dhexeeya waa, kan maanta waxaa lagu qaybsanayaa wadan qudha oo ah Soomaaliya , halka kii hore xoog qayaxan la isticmaalay kan waxaa la isku dhex wadaa Xoog iyo Xeelad.
Waxaa taa kuu cadayn kara:
1-Wadamada contact group la yiraahdo yaa Soomaaliya u xilsaaray yayse wakiil ka yihiin ma qaramada midoobay mise naftooda Jawaabta waa naftooda waayo iyagaa is magacaabay.
2- Waqti aan fogayn waxay soo saareen bayaan ay ku cadaynayaan howlaha Soomaaliya qaramada midoobay in ay ku wareejiyeen, iyagii oo shaar qaramada midoobay gashan oo weliba Itobiya lagu soo biiriyay ayaa meesha kuu soo fariisteen.
3- Waxay diideen oo runtii sharciyada caalamka ka mamnuuc ah in Ciidamada Itobiya ka dhex guuraan meelaha dadka rayidka degan yihiin, taasoo kuu cadaynaysa in dadkii bir ma gaydhada ahayd loo haysto af duub oo lagu gorgortamayo.
4- Maanta caalamka waxuu marayaa heer qolo walba habka ay doonto isku maamusho, xataa meelaha qaar laba rag in la isku nikaaxo iyo laba dumar la isku nikaaxo si xaquuqdooda shaqsiyeed loo dhowro ayay sheegtaan, wadan dhan oo jirana waxaa laga hor taagan yahay in aayahiisa sidii uu doono uga tashado.
5- Waxaa lagu leeyahay Soomaalidu waxay doonayaan in ay shareecada Islaamka isku xukumaan weliba si majara adag. Wadamo badan oo dunida ah ayaa Shareecada islaamka isku xukuma oo xiriir aad u wanagsan la leh kuwa anaga nagu dilaya arimahaa.
6- Maraakiib dagaal oo aad u fara badan oo xeebaha Soomaaliya ku soo qulqulaya iyagoo isu ekaysiinayay in ay la dagaalamayaan burcad badeed oo ay awalba iyaga dhiseen si ay jid uga helaan in ay halkaa yimaadaan oo danahooda ka fushadaan.
Shirka Jabuuti, Shirqoolka Jabuuti waxaa doonta ku sheeg waxaa ku kulmaya seddex maanlaawe oo kala aha kuwa isku sheegay in ay matalaan beesha caalamka oo raali ka ah in la gumaado dad rayid ah oo aan waxba galabsan oo weliba gurigooda iska jooga oo weliba aflagaado iyo handadaad loogu sii daro. Iyadoo weliba afrika oo dhan la il daran tahay cudur, gaajo, jahli iyo weliba dagaalo sokeeye ayaa waxay dhaqaale ku bixinayaan kooxdan in wadan, wadan Afrika isugu duusho oo dagaal aargoosi oo aan dhamaan afrika ku jirto weligeed. Soomaaliya miyaanay beesha caalamka ka mid ahayn mise xolaha caalamka ayay kooxdan Soomaaliya ku tiriyaan!!!!.
Kooxda Doofaareey ayaa ah maanlaawaha labaad shalay waxay wadanka ku soo hogaamiyeen cadow soo jireen ah, magacii umadda iyo maamuuskii taariikhda ummadda ayay tirtireen, gumaad, dhac, kufsi, in waxii la doono ummadda Soomaaliya lagu sameeyo ayay raali ka noqdeen si ay u gaaraan danahooda waalida ah ee xukun jacaylka ah, markii ay danahooda xoog ku gaari waayeen iyagoo weliba maalin walba dhexdooda is xag xaganaya ayay damceen heshiis la soo dhoodhoobay in ay ku sii cimri dheeeraysataan. Mase dhicin!!!.
Maanlaawaha seddexaad waa kooxda ka soo falaagoowday walaalahooda, oo maanta runtii aan ku tilmaami karo kooxda ugu ayaan daran dhamaan maanlaawayaasha meesha ku kulmay, waayo waxaa jab ugu filan maanta labada qolee kale meeshii ay joogeen ayay joogaan. Kooxdan keliya ayaa meel cidla ah taagan waxna faraha kuma hayaan meeshii ay ka yimaadeena kuma noqon karaan waxa hor yaalana wax in la saxiixo loo bareeri karo oo ummadda la dulmay loo soo qaadi karo maaha I bixiyoo I bixi, alahoyoow I bixi ayay maanta maraysaa, bal eeg sharafkii ay ka soo tageen iyo meesha ay indha buuran yihiin!!!.
Guntii iyo gabagabadii kooxda beesha caalamka isku sheegaysa waxay ku faaneen in heshiiska sida ay iyagu rabaaan loo saxiixi doono ama iyagoo dhan ha wada saxiixaaan ama iyaga ruuxooda ha sii kala jabaan. Taa aniga ruuxayga waa la qabaa sida ay na tusayso habkii ay I dhaqmeen kooxdan oo ah in ay marka hore wax diidaan ka dibna inta ay gariir iska kiciyaan saxiix ku jiidaan waxii ay hore u diideen. Loogoow looba jooge ummadda waxaa lagu maaweelin jiray Nabad ayaan Itoobiya ku saaraynaa, maantana waxaa maqli doonaa markaan jagooyin sar sare qabsano ayaan Itoobiya saari doonaa, markaasaan anagana madax u ruxi doonaaaaa!!!!!.